Bristol: Jaaliyada Somaliland ee ku nool magaalad Bristol oo xaflad balaadhan ku hambalyeysay Madaxeynaha Cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo Madxweyne Kuxigeenka Cabdilaahi Saylici | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Bristol: Jaaliyada Somaliland ee ku nool magaalad Bristol oo xaflad balaadhan ku hambalyeysay Madaxeynaha Cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo Madxweyne Kuxigeenka Cabdilaahi Saylici
Published on December 4, 2017 by sdwo · No Comments
Xalay oo isniini soo gelaysay waxa magaalada Bristol lagu qabtay xaflad balaadhan oo boqolaal qof ka soo qaybgaleen oo lagu hanbalyeynayey madaxweynaha cusub iyo kuxigeenkiisa. Dadka ayaa ka kala yimid inta badan magalaada Biristol, London, Cardiff iyo magaalooyinka kale ee u dhowdhow. Halkaasi waxa laga jeediyey qudbado kala duwan oo iskugu Jira hanblayo iyo soo dhoweyn madaxweynaha cusub Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxa iyaguna halkaas dadka heeso qiiro leh ku madadaaliyey fanantiina Nuur Daalacay iyo Nimco yaasin oo qaaday heeso qiiro leh oo luxay qalbiyadii dadkii goobta ku sugnaa. Waxa kale oo goob jog ka ahaa tv ga bbc da ingiriiska oo warkoogii saaka ku soo daray sidey xafladii u dhacday
Clip kan sare waa warkii TV ga BBC da iyo sidii ay uga warantay xafladii xalay
Xaflada waxaa kazoo qaybgalay gudida Fulinta G/Xigeenka koowaad Ahmed Abdillaahi Axda iyo Xidhiidhiyah guud kulmiye uk Jaamac Ali Muse, waxaa kaloo kazoo qayb galay warbaahinta xorta ah sida Tv qaranka, Horn cable Tv. BBC da, waxaa kaloo goobta xafladu kadhacaysay soo buux dhaafiyay dad wayne aad ubadan oo aad wajiyadooda kadheehaynaysay farxad iyo sida ay ugu hanwaynyihiin inay J/ barakaysan ee Slnd noqoto mid harumar iyo Guul kusii talaabsata, Xafladu guud ahaan waxayna kubilaabantay kunasoo dhamaatay guul iyo gobanimo